सधैं सुखी र खुशी हुन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुस - GalaxyPati
सधैं सुखी र खुशी हुन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुस
२०७८ श्रावण २१, बिहीबार ०७:१४
खुसी र सुखी हुने मन कसलाई पो नहोला र रु तर, जानी–नजानी हामीले यस्ता काम गरिरहेका हुन्छौ, जसले हामीलाई चिन्तित बनाउँछन्, सुखी रहन दिंदैनन् । सधैं सुखी हुन चाहनुहुन्छ? त्यसो भए यसो गनुहोला ।
अरूजस्तो बन्ने प्रयास नगर्नु
तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ, त्यस्तै ठीक हुनुहुन्छ । तपाईंले सोचेर आफ्ना काम गर्नुहोस् । अरूको नक्कल गर्ने बानीले तपाईंलाई दुःखी बनाउन सक्छ । आफू जस्तो हुनुहुन्छ, त्यसमा नै खुसी रहेर अगाडि बढ्नुहोस् ।
आफैँसँग झुट नबोल्ने
यो बारम्बार भनिने विषय हो । तर, हामी यसमा सफल अत्यन्त कम हुन्छौँ । तर, सुखी र खुसी हुन चाहने हो भने आफैँसँग झुट बोल्न छाड्नुपर्छ । झन्, सधैँका लागि झुट बोल्न छाड्ने हो भने हाम्रो जीवन अत्यन्त खुसी हुन्छ ।
सबै कुरा ‘पर्फेक्ट’ बनाउन नसोच्ने
आफ्नो आवश्यकता नबिर्सिने
कहिलेकाहीँ साथीभाइ, परिवार तथा आफन्तको आवश्यकता पूरा गर्ने चक्करमा हामी आफ्नै आवश्यकता भने बिर्सन सक्छौँ । आफ्नो आवश्यकता र चाहना बिर्सनु आफूलाई दुःखी बनाउनु हो । सुखी रहन आजैबाट आफ्ना चाहनालाई प्राथमिकता दिन थाल्नुहोस् ।
अरूलाई बदल्ने कोसिस नगर्ने
यो आवश्यक छैन कि सबै मानिस तपाईंजस्तै हुन् । जीवनमा विभिन्न यस्ता मानिससँग भेट हुनसक्छ, जसको व्यवहार तपाईंसँग मिल्दैन वा उनीहरूले तपाईंलाई मन नपर्ने व्यवहार गर्छन् । उनीहरूलाई त्यस्तै रहन दिनुहोस्, बदल्छु भन्ने संकल्प लिएर अगाडि नबढ्नुहोस् ।